Umqeqeshi wama-Proteas Women, u-Hilton Moreeng ulincomile iqembu lakhe ngokunqoba kahle, ngama-wicket ayisikhombisa bedlala ne-England kumdlalo wokuqala we-ICC Women's Championship One-Day International series owadlalelwa e-Worcester ngoMgqibelo. u-Moreeng uwujabulele umdlalo weqembu njengoba bengaphambili ngo-1-0 kumqhudelwano wemidlalo emithathu, kodwa uyasola ngokusheshe bajabule ngoba uyacabanga ukuthi iqembu lasekhaya lingabuya ngamandla kumdlalo okumele bawunqobe e-Hove ngoLwesibili.
"Njengabaqeqeshi kanye nabaphethe, awukwazi ukucela okudlula indlela esaqala ngayo ngoMgqibelo," esho ephawula. "Uma ubuza mina kucishe kwaba umdlalo ophelele, konke kuhambisane nezinhlelo futhi abaphosayo bacicise zisuka (ngaphambili). Ukuza e-England kanye nokudlala nabo ekhaya labo, bekubalulekile kithina ukuyiqala kahle i-series. Ukunqoba kwasinika umdlandla ebesiwudinga futhi kusihlelele kahle i-series."
"Kuyelaphambili, siyazi ukuthi kuzobanzima ngoba i-England iqembu elilimele ekhaya futhi kuzomele sihlele kahle, ekhanda nasemzimbeni, ukuqiniseka ukuthi siwulungele umdlalo olandelayo.
Ukunqoba kokugcina kudlalwa nompetha bomhlaba kube okokuqala kwe-South Africa kusukela beqala ukubhekana nabo ngo-2016, bebahlula -wicket amahlanu e-SuperSport Park e-Centurion. Ngaphambi kwalokho, babengakaze bahlule i-England ekhaya noma kusukela ngo-August 2003 e-Bristol lapho iqembu, ukapteni ku-Alison Hodgkinson, babambelela baze banqoba ngama-runs angu-11 kwi-ODI yesibili kwamathathu. i-England yahamba inqobe i-series zombili lezozikhathi futhi u-Moreeng uthemba ukuthi kulesikhathi, iqembu lakhe lizoqopha umlando ngokuhlula iqembu lasekhaya kwi-ODI series okokuqala.
“Kuzomele sigxile,” eqhubeka umqeqeshi. “Siyazi ukuthi sibhekene neqembu elihle. Ababona ompetha bomhlaba mahala nje. Kuzomele siqiniseke ukuthi sinamathela kwimfundiso yethu futhi sisebenzise izinhlelo zethu zomdlalo. Ndawonye sineqembu elihle futhi abadlali kade baqala ukukholwa ukuthi bangabhekana neqembu elifana ne-England futhi kungaqhudelwana kuphela kodwa banqobe. Leli ithuba lokuphinde sinqobe kusasa, ukunqoba i-series, okuyinto abangakaze bayenza ngaphambilini njengeqembu futhi lokhu kuzoba okukhulu kwi-South Africa kanye nendlela ethathwa iqembu.”
Njengoba i-series isencupheni, u-Moreeng ufuna ukubona ukulungiswa eqenjini lakhe ngasekuvimbeni, kanye nokubili noma okuthathu ngasekuphoseni. Ukholwa ukuthi ukunqoba kuzotholwa iqembu elenza okujwayelekile kahle osukwini.
"Kubadlali bethu kuzomele behlise umoya futhi basebenzise amakhono," esho echaza. "Siyazi ukuthi sikhona isikhala sokulungisa. Kunezinto esaziyo ukuthi besingenza kangcono futhi sinethuba lokuqiniseka ukuthi ngesikhathi sebhola lokuqala kusasa, abadlali babhekile futhi bayazi ukuthi kulungiswa kuphi."
"Ukushaya kwethu bekungekho lapha noma le futhi siyakwazi lokho," esho eqhubeka. "Iqembu likhulumile ngakho namhlanje kumhlangano wethu futhi basebenza ngesikhathi sokuqeqeshwa. Uma siphosa ngesikhathi esiphakathi nendawo, kunokukodwa noma okubili esingabheka ukuthi asikuphindi. Ama-margins amancane, esingabheka ukudlala, kuzosenza iqembu elinzima ukulihlula futhi sizonqoba i-series."
“Kukho konke, silindele umdlalo omuhle. i-England angeke ilale phansi futhi siyazi ukuthi bazobuya ngamandla, kodwa ngicabanga ukuthi abadlali bayilindele inselelo ezayo.”
i-ODI yesibili izovezwa ku-SuperSport 12 kusukela ngo-13:45 (SAST). Ukuhamba komdlalo kuzobakhona ezindaweni zokuxhumana ze-Cricket South Africa ku-Facebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica ) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
Ama-Proteas women angaphambili ngo-1-0 e-England Ama-Proteas women alungele inselelo enkulu ne-England u-Van Niekerk umangazwe ukuthola umklomelo omkhulu, wathi uyinikela eqenjini lakhe Ama-Proteas Women alindele ithuba lokubhekana ne-England futhi i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas Women elizoya e-England Ama-Proteas women athola i-T20 series whitewash u-Luus no-Van Niekerk bahlela ukunqoba i-series kwama-Proteas women Ama-Proteas women aphetha ngokuthola u-5-0 Ama-Proteas Women anqoba emine kwemine Ama-Proteas azimisele ukunqoba i-ODI series e-Kimberley Ama-Proteas women anqobe umdlalo wokuqala bedlala ne-Bangladesh